Redmi Rịba ama 8 bụ nke kachasị agba n'etiti nkeji nke mbụ nke 2020 | Gam akporosis
Redmi Rịba ama 8 bụ igwe kachasị dị n'etiti nkeji nkeji nke afọ mbụ
Ahịa ama bụ otu n'ime ihe niile juputara na ya. Kwa ụbọchị, anyị na-ahụ etu esi ebupụta ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke na-agbasawanye onyinye ahụ, si otú a na-enye ndị na-azụ ahịa ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ịhọrọ, ụfọdụ ka ndị ọzọ mma.
Otú ọ dị, enwere mmasị mgbe niile maka ụdị aha, na ụlọ ọrụ ndị dị ka Samsung, Xiaomi na Huawei, n'etiti ndị ọzọ, bụ ndị a kachasị edozi dị ka ọkacha mmasị. N'ihi nke a, mobiles ha na-enwekarị ọmarịcha ewu na ọnụ ọgụgụ ahịa ka mma, ma e jiri ya tụnyere nke ndị nrụpụta ndị ọzọ amachaghị ama, nke dị ọtụtụ na, maka ọtụtụ, ndị China. Na Ihe ngosi RedN 8, mgbe ọ gafesịrị ọnụ ọgụgụ nke E rere 30 nde nkeji, bụ ihe atụ doro anya na nke a, ebe ọ bụ na Edere aha ya dika eze nke etiti nke nkeji mbu nke 2020 a, obu ahia kachasi nma n'uwa nile.
E zigara ihe karịrị nde 8 Redmi Note 8 n'ụwa niile n'etiti Jenụwarị na Machị
Kasị ere ahịa na nkeji iri na ise nke 2020 | Ọwa mmiri
Dabere na nyocha ahịa na ụlọ ọrụ ahụ Canalys emere ma bipụta ya ọnwa ole na ole gara aga, ọkọlọtọ Redmi Note 8 bụ nke isii ama ama ama n'ụwa niile na nkeji nke anọ nke 2019. Ngwaọrụ a, yana Redmi Note 8T, ghọrọ onye kacha ere ahịa na nkeji nke mbụ nke afọ a, nke na-eme ka o doro anya na ịrịgo o mere n'ihe gbasara mmasị. [Chọpụta: Samsung bụ onye nke abụọ na-emepụta smartwatches n'oge nkeji mbụ nke 2020]
Na ajụjụ, dị ihe dị ka nde 8 nke e webatara ụdị a n'ụwa niile. The Pro version bụ nke anọ kasị ewu ewu na mobile, mgbe Redmi 8A enịm ke okpokoro nke Canalys dị ka nke asatọ.
Nke abụọ kacha ere ahịa n'oge ahụ bụ nke South Korea Samsung, onye kachasị ama ama n'ụwa. El Galaxy A51 bụ ụdị nke ọtụtụ nde ndị ọrụ họọrọ na nkeji iri na ise mbụ, si otú a na-emepụta ihe karịrị nde isii n'ụwa niile.
Ihe ngosi RedN 8
IPhone 11 bụ ihe ama ama karịa nke nwere nde nde 18 gburugburu ụwa. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ama ama dị elu, anyị anaghị agụ ya dị ka ndị dị otu a, ebe ọ bụ na e kwuru na mbụ dị n'etiti etiti. N'agbanyeghị nke a, akara Cupertino na-egosi, ọzọ, na ọ na-aga n'ihu na-etinye ekwentị mkpanaaka n'ọkwá kacha elu nke ọkwa.
na Galaxy A10s, Galaxy A20s y Galaxy A01 Ha bụkwa akụkụ nke ọnụ ahịa ndị kachasị ere n'etiti Jenụwarị na Machị nke afọ 2020. Site na data a o doro anya na Samsung's Galaxy A usoro bu otu n'ime ndi kacha ewu ewu taa, dịka ha nwere ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe nke ndị họọrọ ụdị ha, nke na-anọchite anya ezigbo ego.
Ndị nrụpụta gam akporo ga-agbasi mbọ ike itinye akara flagship na ndepụta a Canalysnke ọma naanị Apple, ya na iPhone 11, abụrụla naanị ụlọ ọrụ jisiri ike mee ya na ya ụdị kachasị nso. Dịka ọmụmaatụ, anyị anaghị ahụ igwe ekwentị Xiaomi dị elu, dịka ọmụmaatụ, nke nwere uru ego bara ụba karịa nke ọtụtụ. Apple na-aga n'ihu na-enwe mmeri n'ọtụtụ ụzọ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ekwentị ya adịghị ọnụ ala na ahịa.
IPhone 11, nke na-edu ogo ahụ, na-ere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 800 ugbu a, ebe a na-enye Redmi Note 8 maka ihe na-erughị euro 200. Ọnụ ego dị n'etiti ekwentị abụọ ahụ buru oke ibu, na-akwado nke ikpeazụ, n'ezie. N'agbanyeghị nke ahụ, ama ama iOS dị ọtụtụ karịa na achọ, n'agbanyeghị na ọ nwere mkpọ maka obere akpa akpa.
Apple bụ nke atọ kachasị ama ama na ụwa, ebe Samsung na Huawei bụ ndị mbụ na nke abụọ. Agbanyeghị, mgbe ọ na-ere ire mobiles dị elu, ọ na-apụta ịpụta karịa abụọ ndị a. Nke a pụtakwara na ọ ka nke ọma na ngalaba a karịa ụlọ ọrụ dịka Xiaomi, OnePlus, Realme, ZTE na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Rịba ama 8 bụ igwe kachasị dị n'etiti nkeji nkeji nke afọ mbụ
Meizu 17 na Meizu 17 Pro: ekwentị ọhụrụ 5G ọhụụ ọhụụ nwere ogwe 90 Hz
Detuo dike gi na Draw a Stickman: Epic 3